အချိန်​မရလဲ ( ၅ )မိနစ်​စာ​လောက်​ ခဏဝင်​၍ ဖတ်​ကြည့်​​ပေး​စေချင်​ပါတယ် - Myanmar Daily
အချိန်​မရလဲ ( ၅ )မိနစ်​စာ​လောက်​ ခဏဝင်​၍ ဖတ်​ကြည့်​​ပေး​စေချင်​ပါတယ်
2019-08-13 Ko Toe knowledge 0
မနက်​ 11 : 30 အချိန်​​လောက်​ ရှိ​နေပြီ ” လမ်း​ဘေးက ​ကော်​ဖီဆိုင်​ရဲ့ ​မြေတလင်းပြင်​​လေးမှာ ( ၇၅ ) နှစ်​ အရွယ်​ ၊အ​​မေအို တစ်​​ယောက်​နဲ့ ​တွေ့​တော့စကားမစပ်​ ​မေးမိပါတယ်​ ”
” အ​မေ” ဒီမှာ ဘာထိုင်​လုပ်​​နေတာလဲ လို့​ပေါ့ချိ့နဲ့နဲ့ အားအင်​​လေးနဲ့ ထကာ ” ကတုန်​ကယင်​ အသံ​လေး​တွေနဲ့..အ​မအိုပြောပုံကသားနဲ့ / သမီး လွှဲလိုက်​တဲ့ ပိုက်​ဆံလာထုပ်​တာပါဘဏ်​ရုံးမဖွင့်​​သေးလို့. ခနထိုင်​​စောင့်​​နေတာပါတဲ့ ၊၊
အ​မေ ဘာစားပြီးပြီလဲ ​မေး​တော့ဘာမှ့မစားရ​သေးပါဘူး သားရယ်​ မနက်​ကတည်းကရုံးဖွင်​မည့်​ အချိန်​ကို ​စောင့်​​နေတာ ”
လာပါ ” အ​မေ ဆိုပြီး မုန့်​ဟင်းခါး ဆိုင်​​ဘေးနားက ” ထမင်းဆိုင်​​လေးမှာအ​မေအို အတွက်​ ထမင်း​ပွဲ​လေး မှာပြီး စီစဉ်​​ပေးလိုက်​တယ်​ ၊၊ဗိုက်​ဆာ​နေလို့လား မသိပါဘူး ” အ​မအို စားလိုက်​တာ ဇွတ်​​ရောတင်း​ရောပဲ ကျွန်​​တော်​ဖြင့်​ သနားလိုက်​တာ ၊ မျက်​ရည်​​တောင်​ ဝဲမိတယ်​ ၊၊
​နေ့လယ်​အချိန်​ ​ရောက်​လာ​တော့ ရုံးက မဖွင့်​​သေးဘူး ဒီနေ့ရုံးပိတ်​များလား မသိဘူး
​သေချာ​အောင်​ အ​မေ့ သားသမီး​တွေဆီဖုန်းဆက်​ကြည့်​ပါ့လား
ပါတယ်​ ပါပါတယ်​ သားရယ်​ ​ပြောကာ အိပ်​ထဲက. ဖုန်း​လေးကို မမ်ိတမိ ဆွဲကာကျွန်​​တော်​ကို လှမ်းကြည့်​​နေတယ်​ ၊၊
ဖုန်းနံပတ်​ သိလား အ​မေ ”
” ဒါပဲ သား ဒိဖုန်းနံပါတ်​ပဲဆိုပြီးပြောရင်းဆိုရင်း အ​မေအိုက ဖုန်းကိုဖွင့်​ကာနံပတ်​​တွေအား နှိပ်​​တော့တယ်​ ၊၊
လက်​​တွေ တုန်​​နေတာမို့ ၊နှိပ့်​၍ မရ​ပေ ၊၊ကျွန်​​တော်​လည်း ဖုန်းနံပတ်​ကို အတိအကျ နှိပ့်​ပြီး ဖုန်း​ခေါ်ကြည့်​​တော့ ဖုန်းဝင်​သွားတယ်​ဗျ့”
( ဟဲလို ) အကို ဒီမှာ အကိုရဲ့ ” အ​မေ ” ဘဏ်​ရုံးမှာ လွှဲ​ပေးတဲ့ . အကိုပိုက်​ဆံအချို့ကိုလာပြီး ထုပ်​တယ်​ ၊၊အကို လွဲ​ပေးလိုက်​ပြီလား ”
လွဲမ​ပေးပါဘူး ပိုက်​ဆံရှာရတာ လွယ်​တာ မဟုတ်​ဘူးကွ ”
အိမ်​လည်း ပြန်​လာမအားဘူး ” အလုပ်​ရူပ်​​နေတယ်​ ကျွန်​​တော်​ အဖွားအိုဘက်​ တစ်​ချက်​လှည့်​ကြည့်​​တော့ ” ပြုံးစိစိနဲ့ အဖွားကလုပ်​​နေတယ်​ ၊၊ငါ့သား​လေးက ငါ့ကို လွမ်း​နေတဲ့ အ​ကြောင်း​တွေ ​ပြော​နေတာ ဖြစ်​မယ်​ဆိုပြီးအဖွားက ပြုံးပြုံး​လေးနဲ့ ​ပြောပြ​နေတယ်​ ၊၊
( ဟဲလို ) အကို
​အေး ပိုက်​ဆံ လွဲမ​ပေး​တော့ဘူးလို့​ ​ပြောလိုက်​ အဲ့အဖွားကြီးကို ” ပြီးတော့ ငါကဒီမှာမိသားစု့ရှိ​နေပြီ
” ​ပျော်​​ပျော်​ရွှင်​ရွှင်​​လေး ​နေပါရ​စေကွာ ၊၊လာမ​နှောက်​ယှက်​ပါနဲ့လို့​ပြောလိုက်​ အဖွားကြီးကို ဒါပဲ ဖုန်းချပြီ ”
ဖုန်း​ပြောပီးအချိန်​မှာ ” အ​မေအိုက ”သားဘာ​ပြောလဲဟင်​ ၊၊အ​မေ့ကို ​နေ​ကောင်းလားလို့
​မေးတယ်​မလား ၊၊အိမ်​ပြန်​လာမယ်​လို့​ရော ​ပြော​သေးလား
အ​မေအို ကြားချင်​​နေတဲ့ စကား​တွေ ကျွန်​​တော်​ လိမ်​ညာပီး ဖြည့်​​ပြော​ပေးရမှာလား ၊၊
သားသမီးတွေရဲ့ စကား​တွေကို ပြန်​​ပြောပြလိုက်​ရင်​ ” အ​မေအို ရင်​ကွဲပက်​လက်​ဖြစ်​သွားမှာ စိုးတယ်​ကျွန်​​တော်​ ထိန်းမရတဲ့ မျက်​ရည်​​တွေနဲ့. ငိုချပစ်​လိုက်​တယ်​ ၊၊အ​မေ့ရဲ့ အဖြစ်​ကို ကြည့်​ပြီး ရင့်​ကျိုးမရဖြစ်​ခဲ့မိတယ်​
ကျွန်​​တော်​ငိုတာကို ” အ​မေအိုက မြင်​​တော့ ဘာလို့ ငို​နေတာလဲ ” သား ”
​သြော်​….အ​မေ့ရဲ့( သားသမိး​တွေဆီက ဝမ်းသာတဲ့ စကားကြားရလိူ့ပါ ဒါ​ကြောင့်​ငိုတာပါ အ​မေလို့ပြန်​​ပြောရင်း.ကျွန်​​တော်​ အ​မေအိုကို အိမ်​​ခေါ်သွားတယ်​ ၊၊
” အိမ်​ပြန်​​ရောက်​​တော့ ” ယူပါ အ​မေ
ဒါက အ​မေ့ရဲ့ သားသမီးဆီက ​လွှဲ​ပေးတဲ့ ​ငွေ​တွေပါ တကယ်​​တော့ အဖွားအို မသိ​အောင်​ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ ပိုက်​ဆံအိပ်​ထဲက. ​ငွေ ( ၂ )သိန်းကို ထုတ်​ပြီး အဖွားအိုအတွက်​ ကန်​​တော့လိုက်​တာပါ ​
ကျေးဇူးမသိတဲ့ သား​တွေ ၊ သမီး​တွေအတွက်​ရင်​​လေးမိပါတယ်​ ၊၊မုန်းလည်း မုန်းတီးမိပါတယ်​ ၊၊
ရှာမ​ကျွေးချင်​​နေပါ ဒုက္ခမ​ပေးကြပါနဲ့လုပ်​မ​ကျွေးချင်​​နေပါမ​စော်​ကားကြပါနဲ့ 
​မေ​မေ ​ကျေးဇူးသိတတ်​ပြီး ​ကျေးဇူးဆပ်​နိုင်​ကြတဲ့ သား​ကောင်း ၊ သမီး​ကောင်း ရတနာ​လေးများဖြစ်​နိုင်​ကြပါ​စေ
အခြိနျမရလဲ ( ၅ )မိနဈစာလောကျ ခဏဝငျ၍ ဖတျကွညျ့ပေးစခေငျြပါတယျ
မနကျ 11 : 30 အခြိနျလောကျ ရှိနပွေီ ” လမျးဘေးက ကျောဖီဆိုငျရဲ့မွတေလငျးပွငျလေးမှာ ( ၇၅ ) နှဈ အရှယျ ၊အမအေို တဈယောကျနဲ့ တှတေ့ော့စကားမစပျ မေးမိပါတယျ ”
” အမေ” ဒီမှာ ဘာထိုငျလုပျနတောလဲ လို့ပေါ့ခြိ့နဲ့နဲ့ အားအငျလေးနဲ့ ထကာ ” ကတုနျကယငျ အသံလေးတှနေဲ့ ..အမအိုပွောပုံကသားနဲ့ / သမီး လှဲလိုကျတဲ့ ပိုကျဆံလာထုပျတာပါဘဏျရုံးမဖှငျ့သေးလို့. ခနထိုငျစောငျ့နတောပါတဲ့ ၊၊
အမေ ဘာစားပွီးပွီလဲ မေးတော့ဘာမှ့မစားရသေးပါဘူး သားရယျ မနကျကတညျးကရုံးဖှငျမညျ့ အခြိနျကို စောငျ့နတော ”
လာပါ ” အမေ ဆိုပွီး မုနျ့ဟငျးခါး ဆိုငျဘေးနားက ” ထမငျးဆိုငျလေးမှာအမအေို အတှကျ ထမငျးပှဲလေး မှာပွီး စီစဉျပေးလိုကျတယျ ၊၊ဗိုကျဆာနလေို့လား မသိပါဘူး ” အမအို စားလိုကျတာ ဇှတျရောတငျးရောပဲ ကြှနျတျောဖွငျ့ သနားလိုကျတာ ၊ မကျြရညျတောငျ ဝဲမိတယျ ၊၊
နလေ့ယျအခြိနျ ရောကျလာတော့ ရုံးက မဖှငျ့သေးဘူး ဒီနရေုံ့းပိတျမြားလား မသိဘူး
သခြောအောငျ အမေ့ သားသမီးတှဆေီဖုနျးဆကျကွညျ့ပါ့လား
ပါတယျ ပါပါတယျ သားရယျ ပွောကာ အိပျထဲက. ဖုနျးလေးကို မမိတမိ ဆှဲကာကြှနျတျောကို လှမျးကွညျ့နတေယျ ၊၊
ဖုနျးနံပတျ သိလား အမေ ”
” ဒါပဲ သား ဒိဖုနျးနံပါတျပဲဆိုပွီးပွောရငျးဆိုရငျး အမအေိုက ဖုနျးကိုဖှငျ့ကာနံပတျတှအေား နှိပျတော့တယျ ၊၊
လကျတှေ တုနျနတောမို့ ၊နှိပျ့၍ မရပေ ၊၊ကြှနျတျောလညျး ဖုနျးနံပတျကို အတိအကြ နှိပျ့ပွီး ဖုနျးချေါကွညျ့တော့ ဖုနျးဝငျသှားတယျဗြ့ ”
( ဟဲလို ) အကို ဒီမှာ အကိုရဲ့ ” အမေ ” ဘဏျရုံးမှာ လှဲပေးတဲ့ . အကိုပိုကျဆံအခြို့ကိုလာပွီး ထုပျတယျ ၊၊အကို လှဲပေးလိုကျပွီလား ”
လှဲမပေးပါဘူး ပိုကျဆံရှာရတာ လှယျတာ မဟုတျဘူးကှ ”
အိမျလညျး ပွနျလာမအားဘူး ” အလုပျရူပျနတေယျ ကြှနျတျော အဖှားအိုဘကျ တဈခကျြလှညျ့ကွညျ့တော့ ” ပွုံးစိစိနဲ့ အဖှားကလုပျနတေယျ ၊၊ငါ့သားလေးက ငါ့ကို လှမျးနတေဲ့ အကွောငျးတှေ ပွောနတော ဖွဈမယျဆိုပွီးအဖှားက ပွုံးပွုံးလေးနဲ့ ပွောပွနတေယျ ၊၊
အေး ပိုကျဆံ လှဲမပေးတော့ဘူးလို့ ပွောလိုကျ အဲ့အဖှားကွီးကို ” ပွီးတော့ ငါကဒီမှာမိသားစု့ရှိနပွေီ
” ပြျောပြျောရှငျရှငျလေး နပေါရစကှော ၊၊လာမနှောကျယှကျပါနဲ့လို့ ပွောလိုကျ အဖှားကွီးကို ဒါပဲ ဖုနျးခပြွီ ”
ဖုနျးပွောပီးအခြိနျမှာ ” အမအေိုက ”သားဘာပွောလဲဟငျ ၊၊အမကေို့ နကေောငျးလားလို့
မေးတယျမလား ၊၊အိမျပွနျလာမယျလို့ရော ပွောသေးလား
သားသမီးတှရေဲ့ စကားတှကေို ပွနျပွောပွလိုကျရငျ ” အမအေို ရငျကှဲပကျလကျဖွဈသှားမှာ စိုးတယျကြှနျတျော ထိနျးမရတဲ့ မကျြရညျတှနေဲ့. ငိုခပြဈလိုကျတယျ ၊၊အမရေဲ့ အဖွဈကို ကွညျ့ပွီး ရငျ့ကြိုးမရဖွဈခဲ့မိတယျ
ကြှနျတျောငိုတာကို ” အမအေိုက မွငျတော့ ဘာလို့ ငိုနတောလဲ ” သား ”
သွျော….အမရေဲ့( သားသမိးတှဆေီက ဝမျးသာတဲ့ စကားကွားရလိူ့ပါ ဒါကွောငျ့ငိုတာပါ အမလေို့ပွနျပွောရငျး.ကြှနျတျော အမအေိုကို အိမျချေါသှားတယျ ၊၊
” အိမျပွနျရောကျတော့ ” ယူပါ အမေ
ဒါက အမရေဲ့ သားသမီးဆီက လှဲပေးတဲ့ ငှတှေပေါ တကယျတော့ အဖှားအို မသိအောငျကြှနျတေျာ့ရဲ့ ပိုကျဆံအိပျထဲက. ငှေ ( ၂ )သိနျးကို ထုတျပွီး အဖှားအိုအတှကျ ကနျတော့လိုကျတာပါ
ကြေးဇူးမသိတဲ့ သားတှေ ၊ သမီးတှအေတှကျရငျလေးမိပါတယျ ၊၊မုနျးလညျး မုနျးတီးမိပါတယျ ၊၊
ရှာမကြှေးခငျြနပေါ ဒုက်ခမပေးကွပါနဲ့ လုပျမကြှေးခငျြနပေါမစျောကားကွပါနဲ့
မမေေ ကြေးဇူးသိတတျပွီး ကြေးဇူးဆပျနိုငျကွတဲ့ သားကောငျး ၊ သမီးကောငျး ရတနာလေးမြားဖွဈနိုငျကွပါစေ
ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စစ်ဆေးစဉ် စစ်ဆေးမခံဘဲ ဓါးဖြင့်ခုတ်သူများအား ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးအရေးယူ
ထီအကြိမ် ၃၀၀ကျော် ပေါက်စေခဲ့တဲ့ အဓဋ္ဌာန်ပုတီးစိပ်နည်
(၁)လသား အရွယ် သမီးလေး နဲ့ ဇနီးကျန်ခဲ့တဲ့ ဂုတ်တွင်းရဲစခန်းမှ ကျဆုံး ရဲတပ်သားရုပ်အလောင်း မီးသင်္ဂြိုလ်
ပုဏ္ဏားကျွန်းတွင် ဒုရဲတပ်ရင်းမှူး ရဲယာဉ်တန်း မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိ တစ်ဦးစိုးရိမ်ရ
About Myanmar Daily
Myanmar Daily is Myanmar’s popular online media and entertainment platform providing real-time news, health, knowledge, business, tech, horoscope, amazing, photos and videos for our readers. Myanmar Daily provides the best experience through its dedicated mobile friendly site. Readers can read both Zawgyi and Unicode Font.